Siera Leôna - Wikipedia
I Siera Leôna dia firenena ao Afrika Andrefana, izay manana morontsiraka ao amin' ny Ranomasimbe Atlantika, manana velaran-tany mirefy 71 740 km². I Freetown no renivohiny.
Sainam-pirenen' i Siera Leôna
I Siera Leôna eo anivon' izao tontolo izao
Sarin-tanin' i Siera Leôna
Tany lemaka amorontsiraka midadasika no mandrafitra ny vohon-tanin' i Siera Leôna, izay mivelatra amin' ny halavana mirefy 80 km ao afovoan-tany. Anjakan' ny lembalemba sy ny tangorom-bohitra ny ao atsinanana. Maro ny renirano manondraka ny tanin' i Siera Leôna.
Betsaka ny karazam-biby any amin' io firenena io, ka anisan' izany ny antilôpa, ny elefanta, ny voay, ny lalomena ary ny rajako. Ahitana karazam-borona maro koa ao.
Miozolmàna ny ankamaroan' ny mponina any Siera Leôna (60 %), maro koa ny manaraka ny fivavahan-drazana afrikana animista.
Miompana amin' ny fambolena ny toekaren' i Siera Leôna, ka anisan' ny volena any ny vary, ny kafe ary ny kakaô. Anisan' ireo tany voalohany mpamokatra vato sarobidy sy diamondra i Siera Leôna.
Zanatany britanika taloha i Siera Leôna, tamin' ny taona 1961 no nahazoany ny fahakeovan-tenany. Nandrotika an' ity firenena ity ny ady an-trano tamin' ny taona 1990 hatramin' ny taoa 2001. Mpikambana ao amin' ny Commonwealth izy. Ny fiteny anglisy no fiteny ôfisialiny.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Siera_Leôna&oldid=1040826"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:29
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:29 ity pejy ity.